Ciyaaraha ugu fiican ee caadiga ah ee lagu gudbo karantiil | War gadget
Ciyaaraha ugu fiican ee caadiga ah ee lagu gudbo karantiil
Waxaan sii wadaynaa inta lagu jiro maalmahan soo-jeedinta iyo bixinta beddelaad ah si aan ugu bixino waqtiga ku xirnaanshaha guriga sida ugu mashquulka badan. Maantana waxaan keenaynaa ikhtiyaar xiiso leh oo sababi doona nolal badan. Webka mahadsanid Diiwaanka Internetka, halka kumanaan iyo malaayiin faylal ah oo leh marin bilaash ah, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan marlabaad ciyaarno ciyaaraha kombiyuutarka ugu caansan.
Kaliya maahan ikhtiyaar layaableh kuweena awalba shanleynaya timo cirro. Sidoo kale waxay fursad u tahay ciyaartooyda da'da yar inay ogow asalka ciyaaraha fiidiyowga ee hadda socda. Wayna hubin karaan horumar ay soo mareen tan iyo markii ay dhalatay oo ay qiimeeyaan tayada fiican ee ay maanta leeyihiin.
1 Ciyaaraha caadiga ah ee badbaadinta caajiska
2 Diiwaanka Internetka: Ciyaaraha MS-DOS
Ciyaaraha caadiga ah ee badbaadinta caajiska
Haddii maanta aan la hadalno wiilal u dhexeeya 14 iyo 18 sano jir kartoonada ciyaarta qaab cajalad ah. Ama waxaan u sheegeynaa sheekooyinkeena Amstrad, Commodore ama Spectrums aqlabiyadda badan waxay u egtahay sida Shiineys. Laakiin way jireen, iyo qaarkeen nasiib wanaag ayaynu ka helnay. Haa ragga, waxaa sidoo kale jiray waqti markii ciyaaraha khadka tooska ah kama jirin oo waxaan mar walba la ciyaareynay mashiin.
Maalmahan karantiil qasabka ah ee guriga aan ku nool nahay waxaa sidoo kale jirta meel loogu noloshay. Karaa ciyaaro ciyaaro 20 jir ka weyn waa layaab dhab ah. Oo waxaan iyaga ku samayn karnaa buugga mahadsanid bogga "softiweerka bilaashka ah" Diiwaanka Internetka. Miyaadan fiirin doonin?
Dajisaa ciyaaraha (kubbadda cagta, kubbadda koleyga, teniska ama xitaa tartanka fardaha), ciyaaraha dagaal, tartanka gawaarida ama diyaaradaha, dagaalo markab ama meel bannaan, istaraatijiyad, waxbarasho, waraaqo, caruur ... Calaamad muujineysa in warshadaha ciyaarta fiidiyowgu aysan aheyn wax cusub oo ay soo saarayaan qalab tayo leh sanado badan oo leh mowduuc aad u kala duwan.
Qaabka MS-DOS ayaan ku helnaa buugga oo aad uga badan 2.000 oo ciyaar. Iyo waxa ugu fiican oo dhan waa taas uma baahan doonno inaan wax kala soo baxno. Websaydhka laftiisa ayaa leh Qabille oo aad ku bilaabi karto ciyaarta ilbiriqsiyo gudahood. Xaqiiqdii qaar badani waxay jecelyihiin inay raadiyaan ciyaartaas oo raad ku reebtay caruurnimadoodii. Nidaam alifbeeto ah oo aan ku raadinno iyaga ayaa wax badan naga caawin doona. Maxaad sugeysaa
Diiwaanka Internetka: Ciyaaraha MS-DOS
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Videogames » Ciyaaraha ugu fiican ee caadiga ah ee lagu gudbo karantiil
New iPad Pro 2020: waxaan kuu sheegeynaa dhammaan wararka